Taariikhda My Butros » Sida lagu Helo in Mood ee Love?
Last updated: Jul. 03 2020 | 2 min akhri
Waxaa jiray waqti adiga iyo seygaaga ama saaxiib Wiil marka kaliya ma ay samayn karin gacmaha off midba midka kale, laakiin hadda wax ay is badaleen oo aad si dhib leh u dareemaan sida samaynta jacaylka. Taas ma u eg xaaladda aad ku sugan tahay haatan? Si loo hubiyo in aad qabto xiiso badan intii aad u leedahay in aad lammaanahaaga hore loo isticmaali, bartaan sida loo helo in niyadda loogu jacaylka.
Samee kaamil ah ambiance ah
Lamaane intooda badan lagu guda jiro maalmaha hore ee xiriirka ay kaliya u baahan tahay geeska gaar ah oo u ku dhacay niyadda ugu fiican qaadashada jacaylka. Si kastaba ha ahaatee, sida xiriirka ka koraayo, bilaabanayo badiyay jiidashada ah waxaa mar loo isticmaalaa inaad hantidaan. Lahaanshaha ambiance saxda ah ayaa kaa caawin kara dadka si aad u hesho niyadda u jacaylka si fudud.
Waxaad isku dayi kartaa adigoo la gaabiyo nalalka aad qol iyo gelinaya qaar music jaceyl on. Hubi in sariirta ma aha qaabkii; dadka intooda badan kaliya ma dareemi kartaa jacayl ah ee ku hareeraysan kharriban. Ha u ogolaan in aad qol inay aad u kulul ama aad u qabow sida labadoodaba noqon karaan turnoffs dagdag ah. Haddii aad qabtid qalabka qaboojiyaha ama kuleylka ah ku rakiban, hagaajiyo. Furidda ama daaqadaha ku dhow ayaa sidoo kale kaa caawin kara in caadi laga heerkulka qolka jifka oo meesha ku haboon ee lagu heli dhafan.
Dila stress ka
Stress waa mid ka mid ah sababaha ugu badan ee damaca galmada oo hoos u. Tirakoobka dhawaan heshay muujisaan in ku dhawaad 15% Raggase waxaa ugu horayn libido hooseeyo sababta oo ah cadaadiska ay ku leeyihiin nolosha. Hormoonkaas waa hormoon oo koontaroosha damaca galmada ee ragga. Sida nin koraayo (30 ama ka badan), uu heerka testosterone ka bilowdey hoos imanaya; stress ku kicin kara wax soo saarka ee cortisol iyo hoos u sii heer testosterone. Sidaas, Nin dhibeen stress sida caadiga ah leeyahay libido hoose ka badan ragga kale ee da'diisa.
Haddii aad rabto in aad dib u soo noqdo qaraxa iyo rabto in aad hesho in niyadda loogu jacayl sida lama filaan ah sida waxaad camal falayseen dib dhowr sano, waxaad u baahan doontaa in aad hesho si ay u dilaan stress ka lamaanahaaga ayaa waxa soo wajahay iyo waqti isku mid ah Is de-carabka ku adkeeyay. Sida habboon, waa in aad is caawino in dib loo soo celiyo dareenka wadajir ku garaaceen stress ka. Isaga sii massage ah ka dibna weydii u celin Nicmada, qubeysan kulul, wada diyaariyo qado, aada oo ku lugeeya beerta ka dib markii casho; kuwaas oo dhanna waxay kaa caawin doontaa in aad adiga iyo lammaanahaaga in istiriixo iyo aad u hesho in niyadda ugu fiican qaadashada jacaylka.
Hubso in aad dareento sexy
Si aad dareento sida samaynta jacaylka, waa inaad marka hore dareemaan sexy. Haddii aanad kalsooni ku saabsan sida aad u eegto ay sabab u tahay miisaanka aad ka soo qaadatay dhowrkii sano ee la soo dhaafay, isku day in aad hit gym iyo lumiso qaar ka mid ah waxaa ka mid ah. Tani waxay ka dhigi doonaa inaad kalsooni badan oo mar kale aad dareemi doonto sexy. Waxaad isku dayi kartaa oo kale ah ka soo lingerie cusub, laakiin hubi in aad tahay raaxo ku sugan; sababtoo ah waa raaxada sidoo kale waa mid aad muhiim u ah dareen sexy.
Si aad u hesho in niyadda loogu jacaylka, waa in aad samaysid waxyaalo baabi'iyo doonaa xiiso ka xiriirkiina. Marka xiriirka noqdo xiiso leh, ma waxaad ka heli doontaa inay ku adkaato inay galaan jir saxda ah ee maskaxda si ay u jacaylka.
7 Talooyin xiriir Romantic